Myat Shu - အဟိလွှတ်တော်…
You are here : Myat Shu » ထင်ရာမြင်ရာ » အဟိလွှတ်တော်…
Published By Myat Shu On Monday, September 26th 2011. Under ထင်ရာမြင်ရာ
Photo/Aye Lei Tun
*ယနေ့ အဟိ လွှတ်တော်သို့ ၀န်ကြီးချုပ် ဦးသော်တာဆွေ မတက်ရောက်၊ မယားနှင့် စိတ်ကောက်၍ အရက်သောက် လွန်သွားသောကြောင့်ဟု လိုလို… သတင်းဖြစ်ပွားနေသည်။ အထူး လျှို့ဝှက်ချက်ကြီး ဖြစ်၍ ပေါက်ကြားလျှင် သက်ဆိုင်ရာတို့ကို ရာထူးဖြုတ်ပစ်မည် ဟူ၍လည်း ကြားသိရ၏။
* ရှင်မောဂ္ဂလန်ရိုက်သည့် ခိုးသား ၅၀၀ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာ။
* ဂြိုလ်တုတွင် လူထည့်လွှတ်မည်။
အဟိ လွှတ်တော် ဖွင့်လျှင် ဖွင့်ချင်း အဟိ ၀န်ကြီးချုပ်၏ အတွင်းဝန်က ဦးသော်တာဆွေသည် ယနေ့ ခင်မျိုးချစ်၊ ငွေတာရီတို့နှင့် ကမ္မဌာန်းထိုင်လိုက်သွားသဖြင့် လွှတ်တော်သို့ မတက်ရောက်ကြောင်း ပြောရာ… အတိုက်အခံ အမတ်အချို့က “ ယုံ… ယုံသေးဘူး”။ အချို့ကလည်း “ဟုတ်စေဦးတော့ အရက်သောက်ပြီး မီးစတစ်ဘက် ရေမှုတ်တစ်ဘက် လုပ်တာ မကောင်းပါဘူး” ဟု အဟိ လွှတ်တော်ကို မိန်းကလေး ဘော်ဒါဆောင်နှင့် တူအောင် ကြွက်စီ ကြွက်စီ ဝေဖန်ကြရာ လွှတ်တော် ဥက္ကဌကြီးက…
“ အမတ်မင်းများ ခင်ဗျား ဒါဟာ သူ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ပင်ကိုယ်စိတ်ဓာတ်ဖြစ်၍ ဘေးမဲ့ထားသင့်ပါကြောင်း၊ လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ဤစကားများဖြင့် အချိန်မကုန်စေသင့်ကြောင်း” ပြောပြီး “ ကဲ… ယခု အစီအစဉ်ရှိတာကို စပါတော့” ဟု ဆိုမှ ရှင်မောဂ္ဂလန်ရိုက်သည့် ခိုးသားငါးရာ အစီရင် ခံစာကို ရွှေဘို မျောက်လက်နှင့် ၀က်လက် နယ်မဲ့ အမတ် ဗိုလ်စကွတ်က ဖတ်ကြားသည်။
သူ့အစီရင်ခံစာ ဆိုလိုရင်းမှာ “ဂေါတမရှင်တော်ဘုရားလက်ထက် ရဟန္တာ ရှင်မောဂ္ဂလန်ကို ရိုက်နှက်သော ခိုးသား ငါးရာသည် ယခု ဆဌသံဂါ ယနာတင် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးနု အစိုးရလက်အောက်တွင် ဌာနအသီးသီးမှာ ဦးနု အခါခါ မိန့်ခွန်းပေးခဲ့သည့်အတိုင်း ခြများ၊ လောက်များ၊ ခွတုပ်များ စသည်ဖြင့် ဖြစ်တည်နေကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ၎င်းတို့ဟာ ယခုအခါမှာဆိုရင် ယခင် ရှင်မောဂ္ဂလန်ကို ရိုက်နှက်ကြတုန်းကထက် ပိုမို မိုက်မဲ တွေဝေနေကြပါသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ဝင်များ အနားမှ မသီဝံ့ဘဲ လက်လျှော့၍ ပြန်ခဲ့ရပါတယ်”ဟု ဆိုလေရာ အားလုံးသော အမတ်များ ဟင်းကနဲ သက်ပြင်းကြီးတွေ တပြိုက်နက် ချကြရာ လွှတ်တော် တစ်ခုလုံး ဟုံးကနဲ မြည်သွားလေ၏။ ထို့နောက် ဤကိစ္စတွင် စုံစမ်းရေးကော်မရှင်အတွက် ၀မ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ဖြင့် ၇၅စက္ကန့်မျှ ဆိတ်ငြိမ်နေကြစေရာ၊ အဟိ လွှတ်တော်အမတ်အသီးသီးသည် မိမိ မယားငယ်ရှိရာသို့၎င်း၊ အရက်ဆိုင် များသို့၎င်း၊ နောက်အပတ်ပြေးမည့် မြင်းစာရင်းကို၎င်း၊ စိတ်ဓာတ်များပြန်လွှင့်ထားခြင်းဖြင့် အောင်မြင်စွာ ဆိတ်ငြိမ်နေနိုင်ကြပါပေ၏။ ယင်းကိစ္စပြီးမှ အစီအစဉ်အရ ဟင်္သာတတောင်ပြင် အမတ်ဦးစိန်ဝင်းအောင်က…
“ဥက္ကဌကြီးခင်ဗျား အဟိ တိုင်းပြည်သည် စက်မှုလက်မှု လောကဓာတ်ပညာ ထွန်းကားတဲ့နေရာမှာ အခြားနိုင်ငံကြီးများနှင့် တန်တူရှိနေသည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ သို့ပါ၍…
(၁) အဟိက ဂြိုလ်တုဆောက်လုပ်ရန်ရည်ရွယ်ပါသလား၊ (၂) ရည်ရွယ်လျှင် မည်သို့အမျိုးအစားပါလဲ၊ ပါပဂြိုလ်ထက် ပါပ ဓာတ်အားများ ပါမည်လား။ (၃) အခြား စက်မှုလက်မှု တိုးတက်ပုံများကို ဖော်ပြပါ။ (၄) အဟိ ဆေးချက်စက်ရုံကြီးမှ မည်ကဲ့သို့ ဆေးစွမ်းကောင်းများကို ထုတ်လုပ်နေပါပြီလဲ။”
(၁) အဟိ တိုင်းပြည်သည် လောကဓာတ်ပညာ ထွန်းကားတဲ့နေရာမှာ အခြားတိုင်းပြည်များ နောက်က တုပလိုစိတ် မရှိသောကြောင့် ဂြိုလ်တုလုပ်ရန် စိတ်ကူး မထည့်ပါ။ ရင်ဘောင်တန်းလိုက်ရန်အတွက်သာ ဂြိုလ်တုတစ်လုံး ၀ယ်ယူလိုက်ကြောင်း၊ အဟိ အသံလွှင့်ဌာနမှ ကျေညာပြီးပါပြီ။
(၂) … ကို ဖြေရန် မလိုတော့ပါ။
(၃) အခြား စက်မှုလက်မှု တိုးတက်ပုံများမှာဆိုရင် နို့ဆီဘူးမှ မီးခွက်အဖြစ်၎င်း၊ မော်တော်ကားတိုင်ယာမှ ဘိနပ်အဖြစ်၎င်း၊ ဒန်အိုးပေါက် ပုလင်လွတ်မှ ပတာနီကုလား ပဲလှော်အဖြစ်၎င်း၊ S.A.M.B စပါးကျီကို ပြာအဖြစ်သို့၎င်း၊ ကွက်သစ်တို့ကို မီးလောင်မြေ၊ ၎င်းမှ လခမနည်းသော တိုက်သစ်ကြီးများ အဖြစ်သို့၎င်း၊ အမျိုးမျိုးပြုလုပ်အောင်မြင်၍ နေပါပြီ။
(၄) အဟိ ဆေးချက် စက်ရုံကြီးမှ ယခုအခါ ကယေကယာပေါက်ပေါက်ဆုပ်များ ထုတ်လုပ်နိုင်၍ သူငယ်တန်း ကျောင်းသားများသို့ ဝေငှပေးနေပါပြီ။
ထို့နောက်… ရုရှားမှ အဟိသုံးငွေ ၇၅ကုဋေနှင့် ၀ယ်ထားသော ဂြိုလ်တုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိပ် ရှင်းလင်းပြသပြီး ဂြိုလ်တုလွှတ်ရာတွင် တိရစ္ဆာန် ထည့်လွှတ်မည်လား၊ လူထည့်မည်လား ဆွေးနွေးကြရာ နတ်တလင်းအမတ် ဦးကြာဟိန်းက…
“ဥက္ကဌကြီး ခင်ဗျာ… ကျွန်တော်၏ ထင်မြင် ယူဆချက်ကို ပြောပါရစေ… ယခုအခါဆိုလျှင် ရုရှားက ခွေးမလီကာကို ထည့်လွှတ်ပြီးဖြစ်သည့်အတွက် တိရစ္ဆာန်ထည့်လွှတ်ခြင်းဖြင့် သူများနောက် မလုပ်သင့်ပါ… အဟိ တိုင်းပြည်၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်ပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်… သူ့အရိုးနှင့် သူ့ပြန်ထိုးဆိုသလို သူ့ဆီက ၀ယ်တဲ့ ဂြိုလ်တုနှင့် သူ့ထက်သာတဲ့ အဖြစ် ရောက်အောင် လူကို ထည့်လွှတ်ဖို့ အဆိုသွင်းပါတယ်”
လွှတ်တော် တစ်ခုလုံး ညီညီညာညာ ထောက်ခံကြ၍ ဤအဆိုကို အတည်ပြုလိုက်ပြီးနောက် ဘယ်သူ့ ထည့်လွှတ်မလဲဆိုသည့် ပြဿနာ ပေါ်လာသည်။
ယင်းတွင် အမတ်တယောက်က ရုရှားဂြိုလ်တုနှင့် လိုက်ပါဘို့ ရုရှားသံရုံးမှတဆင့် မော်စကိုသို့ လျှောက်လွှာတင်သည့် ကိုသန်းထွဋ်ကို အကြံပေးရာ သက်ဆိုင်ရာ အတွင်းဝန်က…
“ အမတ်မင်းခင်ဗျား… ရုရှားက ဂြိုလ်တုလွှတ်တဲ့ အခါမှာ လောကဓာတ်ပညာ စုံစမ်းရေးအတွက် ၎င်းပညာကို နားလည်တဲ့သူမှသာ ထည့်လွှတ်မည့်နည်းတူ ကျွန်ုပ်တို့ အဟိကလဲ အနုပညာအတွက် အထူးသဖြင့် စာပေအတွက် ဖြစ်ပါသောကြောင့် စာပေကိုနားလည်သူ စာရေးဆရာ တစ်ယောက်ယောက်ကိုသာ ထည့်လွှတ်ဘို့ ရည်ရွယ်ချက် ရှိပါတယ်… ”
ဤတွင် အတိုက်အခံအမတ်အားလုံးက “ဒါဖြင့် စာရေးဆရာ… ကျုပ်ကို အဟိ ဥက္ကဌကြီး ဦးသော်တာဆွေ”ဟု သေကြောင်း ကြံလိုသော စိတ်ဓာတ်နှင့် တညီတညာတည်း အဆိုသွင်းကြရာ၊ အမယ်လေး ဖ စ သ အမတ်က ဦးရေရော… ပဲ့ရေရော ပိုများလို့သာပေါ့… မဲခွဲရာမှာ ထိုအဆို ရှူံးသွားပေလို့။
နောက် အလွမ်းစာရေးဆရာ သန်းဆွေကို အဆိုသွင်းကြပြန်ရာ…
“ဟာ… သည်ကောင်နဲ့ မဖြစ်ပါဘူး… မျက်ရည် တစက်စက်နဲ့… ဂြိုလ်တု ကမ္ဘာပတ်တဲ့အခါမှာ ကမ္ဘာအရပ်ရပ် ကြွက်သေးပန်းသလို နေပါဦးမယ်” ဆိုခြင်းဖြင့် ထို အဆို ရုတ်သိမ်းသွား၏။
ထို့နောက် တဖန် ယခု စာပေဗိမာန်ဆု နောက်ဆုံးရ ဂျာနယ်ကျော် မမလေးကို အဆို သွင်းကြပြန်ရာ၊ သူမသည် စာပေစိတ်ဓာတ် ရင့်သန်ပါ။။ ရဲရင့်သတ္တိရှိပါ၏။ သို့သော် သားသမီးသံယောဇဉ်တွေ ရှိနေ၍ မသင့်လျော်ပါ။ ထို့ပြင်… ရုရှားက လွှတ်ထားသည်မှာ ခွေးမကလေးဖြစ်နေ၍ သူတို့ချင်း(၀ိညာဉ်ချင်း)တွေ့သော် မသဘာဝအချင်းချင်း ပဋိပက္ခဖြစ်နေခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာသို့ အကျိုးရှိသော သတင်းများ ပြန်ပို့နိုင်ကြမည်မဟုတ်ဟု ကန့်ကွက်ပြီသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ထည့်လွှတ်သင့်သူကို ချက်ခြင်း ရှာဖွေတွေ့ကြသည်။ ၎င်းမှာ ဒဂုန်တာရာ….
ဒဂုန်တာရာသည် လူပျိုကြီးဖြစ်သည်။ ဘာမျှ သံယောဇဉ်မရှိ၊ ခွေးမလေး လီကာနှင့် တွေ့လျှင်လည်း ဖိုနဲ့ မ ၀ိညဉ်ချင်း သင့်မြတ်နိုင်စရာ ရှိသည်။ ထို့ပြင် ၎င်း၏ နာမည်မှာ “တာရာ” ဖြစ်နေ၍ တကယ့် နက္ခတ်တာရာ ဖြစ်သွားရန်မှာ လွန်စွာမှ သင့်မြတ်လှကြောင်းဖြင့် အားလုံး သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးနောက် ထို့နေ့ လွှတ်တော်ကို ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါ၏။
နောက်လ… ဒဂုန်တာရာကို ဂြိုလ်တုနှင့် လွှတ်ပါလိမ့်မည်…။
ဒီဇင်ဘာလ၊ ၁၉၅၇ ခုနှစ်
« ပန်းချီကား ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရည်ညွန်းနေသည့် အပြောင်းအလဲ »
Posted On Thursday, September 11th 2014
ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အပြောင်းအလဲများကို အခွင့်အလမ်းကောင်း အဖြစ် ဖန်တီးနိုင်လျှင် ဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများကို ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဟု ယူဆမိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေး၊ တုံ့ပြန်ရေး၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် ဖွံ့ဖြိုးစ ပြုလာသော ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာ တိုးတက်မှုကို ထိရောက်စွာ ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်လျှင် နိုင်ငံသားတို့၏ အသက် အိုးအိမ် စည်းစိမ်များနှင့် နိုင်ငံတော်၏ အရင်းအမြစ် သယံဇာတများကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံတော်ပိုင်၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီများဖြင့် ညှိုနှိုင်း၍ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း အသုံးပြု ဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင် သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ရေး စနစ် (Mobile Disaster Alerts System) ကို စတင် ဆောင်ရွက်သင့်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း ထင်မြင်မိပါသည်။
Posted On Thursday, January 16th 2014
နေလို့ သိပ်မကောင်းတာနဲ့ လှဲအိပ်နေရင်း စိတ်ကူးပေါက်တာနဲ့ သက်ဦးဆံပိုင် ရှင်ဘုရင်ခေတ်မှာ ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ လင်ကွာ၊ မယားကွ၊ ဘာသာခြား လင်နေ၊ မယားနေ ကိစ္စတွေကို ရှေးဓမ္မသတ် ဖြတ်ထုံးတွေမှာ ဘယ်လို ပြဆိုသလဲ ဆိုတာ သိချင်လို့ ဆရာဦးအောင်သန်းထွန်း ပြုစုတဲ့ ဓမ္မသတ်သမိုင်း သုံးစောင်တွဲကို ဖတ်ကြည့်တော့ မင်းတုန်းမင်းတြားကြီး ...
Picture credit to rakanindobhasa.blogspot.com ယခုနှစ်ပိုင်းကလေးမျာသည်ကား ကျွန်ုပ် ဂျက်ကွမ်းခြံကုန်းအဖို့ ရောင်းပန်းဝယ်ပန်း အလွန့်အလွန်လန်းသည့် နှစ်ပိုင်းကလေးများပင် ဖြစ်ချေပေသည်တမုံ့။ ဟုတ်ကဲ့။ ဂျက်ကွမ်းခြံကုန်း မပါလျှင် အဘယ်နေရာမှာမှ ပွဲမစည်တော့ဟု ဆိုရလောက်အောင်ကိုပင်လျှင် ထားဝယ်ဘက်မှာဆိုလည်း ဂျက်၊ မြစ်ကြီးနားဘက်မှာဆိုလည်း ဂျက်၊ မူဆယ်ဘက်မှာဆိုလည်း ဂျက်၊ တာချီလိတ်ဘက်မှာဆိုလည်း ဂျက်၊ ...
ကျောင်းသား အခြေမပြုသေးတဲ့ အခြေခံပညာရေးစနစ် တစ်ခါပြင်ကြပြန်ပြီ
www.infed.org ၀န်ကြီးတစ်ခါပြောင်း..ပညာရေးစနစ်တစ်ခါပြင်တဲ့..ပြင်ညာရေးလို့ အရပ်ထဲမှာ အသောဖောက်ကြတဲ့ အခြေခံပညာရေးစနစ်ကို ထုံးစံအတိုင်း ခေတ်နဲ့အညီ ပြောင်းဖို့ ပြင်ကြရပြန်ပါပြီ။ ကောင်းမယ်ထင်လို့ လုပ်ကြည့်ကြပေမယ့်...မိဘတွေ ကျောင်းသားတွေဘက်က ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတဲ့ အခါမျိုးမရှိခဲ့တဲ့ စမ်းသပ်ခံပညာရေးစနစ်ဖြစ်ခဲ့တာ ငြင်းလို့မရတဲ့အချက်တစ်ရပ်ပါ။ (၄)တန်းရောက်မှ အေဘီစီဒီ စသင်ရတဲ့ခေတ်မျိုးလည်း တွေ့ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ငါးပြားနဲ့ ဆယ်ပြားပေါင်းရင် ဘယ်လောက်ရလဲ-ဆိုတဲ့ သင်္ချာသင်ခန်းစာကို ကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဖတ်စာအုပ်ထဲမှာပြထားတဲ့ မှုန်ဝါးဝါး ...
Posted On Friday, September 28th 2012
picturesoftheplanet.com သီတင်းကျွတ်ဖို့က တော်တော်လေး လိုသေးတယ်။ ဗျောက်အိုးသံတွေကတော့ နားမခံနိုင်အောင်ပါပဲ။ နည်းပညာတွေ တိုးတက်လာလို့လားတော့ မသိ၊ ဒီနှစ် ဗျောက်အိုးတွေ မီးရှူးတွေက တော်တော် အသံကျယ်လွန်းတယ်။ ဗျောက်အိုးသံနဲ့ မတူဘဲ လက်နက်ကြီးသံ၊ မိုင်းခွဲတဲ့အသံမျိုးတွေ ဖြစ်နေလေတော့ ၈၈-အရေးတော်ပုံကာလပဲ ပြန်ရောက်နေသလို၊ ကလေးဘ၀က ပြည်နယ်ကြီးတစ်ခုမှာ နေခဲ့ရဖူးတဲ့အချိန်ပဲ ပြန်ရောက်သွားသလို ...